Injineernimada ghostwriter - waraaqaha waraaqaha
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibradda injineernimada ee lagama maarmaanka ah
Koorsooyinka injineernimada, sida Injineernimada farsamada, injineernimada korontada, injineernimada gawaarida, injineernimada aerospace, injineernimada deegaanka, IWM waxaa lagu gartaa xaqiiqda ah in ardaydu sida caadiga ah ay ku farxi karaan hal abuurka soo saarista alaabooyin farsamo oo cusub ayna soo saari karaan xalal aad u qalafsan oo cusub. Waxaad badanaa ku mashquulsan tahay horumarinta sheyga kumbuyuutarka kombuyuutarka. Noqo, tusaale ahaan, abuurista sawiro farsamo ama isku soo aruurinta jaantusyada wareega korantada. Waxay kuxirantahay nooca koorsada waxbarasho ee aad dooratay qeybta injineernimada, waxaad yeelan doontaa diirado kaladuwan. Sababtoo ah noocyada kala duwan ee injineernimada, waxay sidoo kale muhiimad gaar ah noo leedahay annaga oo ah wakaaladda qorista in lagu qalabeeyo tiro badan oo ah qorayaal aad u tababaran. Waqti kadib, waanu ku guuleysanay inaan sidaa sameyno. Waxaan kuu haynaa xiriir sax ah oo adiga kugu saabsan oo loogu talagalay aagag kala duwan oo ballaaran! Qorayaasha shaqeeya maalmahan, tusaale ahaan, gaadiidka, gudbinta ama horumarinta softiweerka oo aan si fiican loo tababaran karin! U ogolow naftaada helfen dhammaan howlaha aad u baahan tahay inaad ku guuleysato!
Injineeriyada ayaa noqotay goob aad caan u ah oo wax lagu barto ardayda. Inbadan oo iskuulada ka baxdaa ayaa dooranaya jihadaan markay dhammeeyeen dugsiga sare. Kuwa badan oo iyaga ka mid ah ayaa si gaar ah u soo jiitay rajada mustaqbal ee mustaqbalka wanaagsan iyo mushaharka celceliska ka sarreeya ka dib qalin jabinta. Qaar kale waxay raadinayaan caqabad shaqsiyeed si joogto ah u raadinta xalal cusub oo hal abuur leh dhibaatooyinka kakan. Diirada dhammaan koorsooyinka injineernimada ayaa si gaar ah ugu saabsan horumarinta wax soo saarka cusub. Si kastaba ha noqotee, aagagga aan ka ahayn horumarinta wax soo saarka saafiga ah ayaa sidoo kale lagu daboolay koorsada injineernimada. Shahaado kasta oo injineernimo ah waxaa loo yaqaanaa heerkeeda aadka u sarreeya ee dhibaatada iyo heerarka ka-bixitaanka ee aad u sarreeya ee koorsada. Maaddooyinka loolanku ka dhexeeyo sida makaanigga farsamada ama tooska hadda jira iyo kan hadda la beddelo ee daraasaddaha ayaa inta badan u horseeda rajo beel arday badan. Sida qorayaasha cirfiidka, si kastaba ha noqotee, waan ku yareyn karnaa. Kuweena Adeegga qoraaga ayaa kaa taageeri kara waxyaabo badan, oo aan jeclaan lahayn inaan si kooban kuugu tusno xagga hoose.
Qoraalka ghost ee injineernimada guud
Waayo-aragnimadu waxay muujisay in qoraal-gacmeedka tacliimeed ee cilmiga injineernimada uu inta badan la xiriiro mowduucyada soo socda:
Taageero abuurista qoraallo tacliimeed (shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraalka takhasuska)
Ku caawi Akhrinta
Shaqada guriga (shaqooyinka xisaabta, iwm)
Abuuritaanka shaqada mashruuca
In the bachelor and master theses, borofisarrada injineernimada waxay dalbanayaan hal shay oo dhan - inay ku dabaqaan aqoonta takhasuska leh ee la helay si habsami leh iyo inay ka baaraandegto wax soo saarka kala duwan si ay u awoodaan inay xalliyaan dhibaatooyinka cakiran.
Injineernimada qaybta injineernimada farsamada
Qorayaashayaga qormooyinkeenu waxay leeyihiin faa iidada, tiro badan oo shaqo oo ay hore u qabteen awgood, waxay si sax ah u yaqaanaan waxa muhiimka u ah qoraalkaaga iyo waxa ay bareyaashu doonayaan inay ku arkaan shaqadan oo kale maadooyin aad u wanaagsan. Injineernimada makaanikada waxaa jira maaddooyin fara badan oo adag oo ay tahay in laga gudbo:
Laga bilaabo daraasad suugaaneed oo dhammaystiran, oo aasaas u ah qoraal kasta, illaa naqshad farsamo cilladaysan oo nuxurka ah, erey gebogebo ah oo dhammaystiran iyo liistada lifaaqyada, wax walba waxay galayaan darajada. Dabcan sidoo kale waxaan kaa caawin doonnaa qeybta injineernimada xagga tafatirka iyo akhrinta. Waxaa lagugula socodsiin doonaa khaladaadka suurtogalka ah iyo dhibaatooyinka waxaadna ka faa'iideysan doontaa taageerada shakhsi ahaaneed ee aad u fiican isla waqtigaas Waxa ugu fiican ee la sameeyo ayaa ah inaan ka helno macluumaadka ku saabsan adeegyadayada tallaabada ugu horreysa, iyadoo aan waajib la ahayn, iyo inaad u diyaariso baaritaankaaga shakhsi ahaaneed mawduucaaga. Kadib waan hubin doonaa codsigaaga, waxaan dooran doonaa qoraaga ugu fiican ee suurtogalka ah ee kiiskaaga waxaanan kaa dhigi doonnaa dalab aan qasab ahayn. Noo soo qor codsigaaga hadda!
Injineernimada qaybta injineernimada korantada
Injineerinka korontada waa mid ka mid ah cilmiga injineernimada ugu adag. Maadooyinka:
Xilliga tooska ah
Farsamada casriga ah
waxaad hubtaa inaad taqaanid. Waxaad u badan tahay inaad sidoo kale aragtay mid ama arday kale oo ku dhacay maadooyinkan isku day saddexaad. Caawimaaddeena, taasi yaanay kugu dhicin adiga. Waxaan kaa caawin doonaa howlaha xisaabta waxaanan diyaarin doonaa waraaqaha teeramka, teesaska bachelor-ka iyo maaddooyinka mastaradka. Hada nala soo xiriir.
Injineerinka qaybta ganacsiga
Injineerada dhameeyay waxay ku raaxeystaan ​​sumcad aad u wanaagsan laamo badan oo warshadeed! Tani waxay sidoo kale kaa faa'iideysan doontaa markaad bilowdo xirfaddaada. Injineeradu waxay ku bilaabaan isla bilowga mushaar bilaw aad u sareeya. ,60.000 XNUMX ma aha wax aan caadi ahayn! Mushaharka bilowgu wuxuu badanaa ku saleysan yahay qaybta dhaqaalaha, heerka tacliinta iyo waxqabadka tacliimeed ee la gaadhay. Maaddaama aan adeeg xirfadeed ku qorayo cirfiidka, waxaan garab taaganahay oo aan awood u siineynaa xitaa ardayda ka hooseysa celceliska inay ku guuleystaan ​​waxqabadka ka sarreeya celceliska caawimaaddayada! Naftaada ka dhaadhici oo naga hel taageero shaqsiyeed!
Hubinta tayada ee dhinaca injineernimada